Izincomo ezimbalwa mayelana nendlela yokunquma amaqanda amasha
Akuyona imfihlo kunoma ubani ukuthi amaqanda ayidla eyigugu, ecebile izinto eziwusizo namaminerali. Noma kunjalo, zingadliwa kuphela uma amaqanda ahlanzekile. Ngokuqinisekile, abaningi babhekene neqiniso lokuthi emashalofini ezitolo "amanga" ngehlobo lokudla kwekhwalithi, futhi ekhaya ngokuzumayo kuvela ukuthi "ushicilele" izimpahla ezichithekile. Yiqiniso, wonke umuntu ufuna ukufunda ukuthi unquma kanjani amaqanda amasha, ngoba "akekho ofuna ukuphonsa imali".
Kodwa-ke, kunezindlela eziningi zokubheka ngazo ikhwalithi yomkhiqizo wenkukhu okukhulunywe ngenhla.
Ngakho-ke, masiqhubekele ekuhlanganyeleni kombuzo wokuthi singanquma kanjani amaqanda amasha.
Indlela yobudala imane nje ithukuthele umkhiqizo: uma "i-germ" idumaza kakhulu, umkhiqizo wokudla onjalo awufanelekile ukudla.
Ungasebenzisa futhi indlela ebonakalayo. Bheka igobolondo: amaqanda amasha asanda kubeka, njengomthetho, abe nomthunzi we-matte, futhi "stale" inobuso obuhlaza obuhlaza obomvu.
Indlela yokunquma amaqanda amasha okwamanje? Abanye bahlole izinga lomkhiqizo wokudla ngenhla besebenzisa isilinganiso sokushisa. Noma kunjalo, "i-thermometer yeqanda" ayingakaqalwa, ngakho-ke ulimi lungenza ngekhwalithi yalo.
Namathisela olimini ukuphela okucacile nokubukhali komkhiqizo othengiwe. Eqanda elisanda kufakwa, ukuphela okunzima kuzokufudumala kunalokho okubukhali. Umkhiqizo we-stale uzoba nokushisa okufanayo kokuphela kokuphela. Okubalulekile: ngaphambi kokuvivinya, geza iqanda ngesisombululo se-baking soda.
Zikhona yini ezinye izindlela zokunquma amaqanda amasha? Ngokuqinisekile. Umkhiqizo wenkukhu okukhulunywe ngaye ngenhla ungahlukaniswa phakathi kwetafula kanye nokudla. Futhi isigaba sesibili sihlanganisa nalawo adilizwa hhayi kungakapheli isonto kusukela ngesikhathi sokubeka ku-counter. Amaqanda, lapho le nkhomba ehluka khona kusukela ezinsukwini eziyisikhombisa kuya kwezingamashumi amabili nanhlanu, kuthathwa njengamakamelo okudlela. Kumele kuqashelwe ukuthi imikhiqizo yokudla kufanele ibe nosuku lokubhalisa.
Indlela yokunquma ukushayeka kweqanda lezinkukhu ngenye indlela? Ikhwalithi yayo ingahlolwa ngesisombululo se-8% sosawoti ekhishini lapho ungafaka khona iqanda. Uma ingabonakali, ngokuqinile "ukuxazulula" phansi, bese "iminyaka" yayo - kusukela ezinyangeni ezinye kuya kweziyisithupha. Uma ilele engxenyeni engama-45 ° futhi ngesikhathi esifanayo ukuphela okunzima "kugijima" phezulu, inkukhu ithathe iqanda kusukela ezinsukwini eziyisikhombisa kuya kweziyishumi ezedlule.
Uma lo mkhiqizo wokudla "umi" phansi - cishe izinsuku eziyishumi nambili "inzalo", uma ibhukuda - kusukela ezinsukwini eziyishumi nantathu kuya kweziyishumi nesikhombisa. Uma ubona ukuthi ukuphela kwamaqanda okuqanda "ama-peeps" aphuma emanzini, yazi ukuthi umkhiqizo awufanelekile ukudla.
Abaningi banesithakazelo embuzweni wokuthi banganquma kanjani amaqanda ama-qua fresh, njengoba futhi futhi isitolo sokugcina amavithamini nezakhi. Impendulo ilula: njengezinkukhu.
Zama ukuphula iqanda lezigwaca epanini lokuthosa. Umkhiqizo omusha uzoba ne-yolk enesisindo esivumayo, kanye nesiprotheni esobala. Iqanda eliqothukile ngokuvamile linomuthi ohlangene, ovele usakaze epanini lokuthosa.
Likuphi Santa Claus uchitha ehlobo - kuyathakazelisa zonke!
Dracaena Godsefa: incazelo, izici nokunakekela ekhaya
Yini ukondla ibele York? Izici zohlobo
Kuhle glue imoto somoya